Showing ८१-९० of १७९ items.
धरान । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले चिनिया कम्पनी हुवाबेलाई ३२ करोड जरिवाना तिराएका छन् । सम्झौता अवधिभन्दा ६ वर्ष बढी भइसक्दा पनि काम नगरेको भन्दै हुवाबेलाई सञ्चारमन्त्रीले जरिवाना तिराएका हुन् । हुवाबेलाई नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म काम अघि नबढाएपछि मन्त्री बास्कोटा आफै कारबाहीका लागि उत्रिएका हुन् । दशवटै परियोजना ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र टेलिकम नेतृत्वको लाचारीका कारण अलपत्र परेपछि मन्त्री कारबाही उत्रिदै छन् । हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा शुरु भएको थियो । नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित
धरान । मिस वल्र्डमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी शृङ्खला खतिवडाले तयार पारेको ‘व्यूटी वीथ प्रपोज’ का लागि तयार पारेको भिडियो प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाली ठेट भाकाको उक्त भिडियो प्रस्तुत गरेसँगै गुञ्जयमान हल शान्त बनेको थियो । व्यूटी वीथ प्रपोजमा उनले गरेका सामाजिक कार्यहरूलाई कलात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । भिडियोको सहयोगले नै उनले मिस वल्र्डमा व्यूटी वीथ प्रपोज टाइटलसमेत जितेकी छन् । चीनको सान्यामा जारी मिस वल्र्डमा नेपालको तर्फबाटल उनले पहिलो पटक व्यूटी वीथ प्रपोज टाइटल जित्न सफल भइन् । नेपाली समयअनुसार अपरान्ह ४ः४५ बजेबाट कार्यक्रम शुरू भएको छ । प्रतियोगिता मिस वल्र्डको आध
जनकपुरधाम/ जनकपुरधाममा आउँदो यही मङ्सिर २६ गते जनकपुरधाममा आयोजना हुने विवाहपँचमीको लागि सरोकारवालाहरुले उत्साहपूर्ण रुपमा तयारी गरिरहेको बताएका छन् । विगतका कालमा हात्ति घोडामा अयोध्याबाट जन्ती आउने परम्परा परास्त हुँदै गएपनि जनकपुरधाम प्रत्येक वर्ष लाग्ने विवाहपँचमी महोत्सवको रौनकता भने अझै नगएको महसुस गर्न सकिन्छ । महोत्सवमा यस पटक भारतको अयोध्याबाट आउने भगवान् श्रीरामको प्रतीक स्वरूप आउने जन्तीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको समेत सहभागिता रहने चर्चा छ । प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जानकी मन्दिरका महन्तको पहलमा जानकी मन्दिर परिसरदेखि बाह्रबिघा रंगभूमि मैदानसम्
प्रकाशित मितिः मंसिर २१, २०७५
विराटनगर/सर्खुेतको विरेन्द्रनगर घण्टाघरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलपमेण्ट नेपालको क्षेत्रिय र शाखा प्रमुखले गाउँभरीको कृषकको पैसाँ उठाएर सम्पर्कविहीन भएका छन् । उक्त एग्रिकल्चरको धरानको पानवारी स्थित क्षत्रिय प्रमुख रहेका एंकम शर्मा वली र विराटनगर–४ कन्चनबारी स्थित शाखा कार्यालयका प्रमुख रंगप्रसाद देवकोटा जिल्लाभरीबाट जम्मा भएको कृषकको पैसाँ लिएर फरार भएका हुन् । मोरङको १७ स्थानिय तहमध्धे १४ वटा स्थानिय तहमा सामाजिक परिचालकमा कर्मचारी नियुक्ति गरि गाउँभरीका कृषकहरूबाट कर्मचारीले उठाएर जम्मा गर्न शाखा कार्यालयमा राखिएको पैसाँ लिएर शाखा प्रमुख देवकोटा र क्षेत्रिय प्
१,०६७ पटक पढिएको
दाइजो नलिई बाँधिए यादव जोडी
तेह्रथुम/तराई क्षेत्रमा वर्षौदेखि जरो गाडेर बसेको दाइजो प्रथालाई त्याग्दै तराइ मूलका एक जोडी दाइजोविहीन विहे गर्दै समाजमा उदाहरणीय जोडी बनेका छन् । दाइजोकै कारण वर्षेनी गरिब तथा विपन्न परिवारले ज्यानसम्म गुमाइरहेको सन्दर्भमा एक जोडीले दाइजोविहीन विहे गरेर उदाहरणीय बनेका हुन् । उनीहरूको विहेले चौतर्फी प्रशंसा पाउन थालेको छ । सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–७ नरसिंह घर भई प्राविधिक कार्यालय तेह्रथुममा कार्यरत गङ्गासागर यादव र सर्लाही कविलासी नगरपालिका–६ की बिनिता यादवले मैथिली परम्पराअनुसार दाइजोविहीन विहे गरेका हुन् । गङ्गा पेशाले सिभिल इञ्जिनियर र बिनिता आर्किटेक्चर इञ्जि
१,४५० पटक पढिएको
खै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ?
विजयपुर/ संविधान निर्माणपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर सुन्दै आएका धरान–१५ का यादव ओझा धरान उपमहानगर धाएको महिनौं भइसक्यो । तर, उनले सिंहदरबारको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । विगत जस्तो थियो, अहिलेको कार्यशैली उस्तै छ । वडाबाटै हुने जग्गाको सिफारिसका लागि उनी प्राविधिक अभावमा उपमहानगर कार्यालय पुग्नु परेको छ । त्यै पनि प्राविधिक भेट्टाउन मुस्किल परेको उनी बताउँछन् । ‘खैं, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्थे । नारामात्रै र’छ ।’ उनले यसरी गुनासो पोखे । नियमानुसार एक वडामा एक प्राविधिक हुनुपर्छ । तर अहिले धरानका २० वटा वडामा प्राविधिक अभाव छ । जनसंख्याको हिसाबले सब
स्क्रब टाइफसबाट एकको मृत्यु
पथरीशनिश्चरे/मोरङको पथरीशनिश्चरेमा ‘स्क्रप टाइफस’ को संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । ‘टिक’ नामक किराको सङ्क्रमणबाट हुने ‘स्क्रप टाइफस’ बाट पथरीशनिश्चरे–३ का ४१ वर्षीया रामप्रसाद (कृष्ण) पोखरेलको मङ्गलबार ज्यान गएको हो । शुरुमा ज्वरो आएपछि जाँच गर्दा ब्याक्टेरियाले फोक्सो र मुटुमा असर पार्न थालेको भन्दै ग्राण्डी अस्पतालमा १४ दिने राखेर उपचार गरिएको थियो । त्यसपछि शिक्षण अस्पतालमा असोज १२ गतेदेखि उपचारका क्रममा २ महिनापछि निधन भएको हो । उनलाई उपचारका क्रममा १ महिना १४ दिन भेन्टिलेटर र अति सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा उन
प्रदेश १ मा हत्याको घटना बढ्यो, ११ महिनामा ५४ को हत्या
विराटनगर । १४ जिल्ला रहेको १ नम्बर प्रदेशमा हत्याको घटना बढेको छ । ११ महिनामा ५४ जनाको हत्या भएको तथ्याङ्ग सार्वजानिक भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा यस वर्ष ११ जनाको बढी हत्या भएको हो । सन् २०१७ मा प्रदेशमा ४३ वटा हत्या भएकोमा ०७४ पुसदेखि ०७५ मंसिर १४ गतेसम्म ५४ जनाको हत्या भएको इन्सेक प्रदेश नम्बर १ विराटनगरस्थित रहेको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्गमा उल्लेख छ । इन्सेकले सार्वजानिक गरेको मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०१९ का लागि संकलन गरिएको घटनाको तथ्याङक अनुसार सबै भन्दा बढी पुरुषको हत्या भएको इन्सेकको अभिलेखमा देखिन्छ । जसमा २६ जना पुरुषको हत्या भएको छ । त्यस्तै २ जना म
अब कलेजोकाे सम्पूर्ण उपचार बीपी प्रतिष्ठानमा
धरान / वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कलेजो सम्बन्धि रोगको उपचारमा सहजता हुने भएको छ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभा युनिभर्सिटी हस्पिटलले कलेजो परीक्षणका लागि अति आवश्यक पर्ने उपकरण फाइब्रोस्क्यान मेशिन प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएपछि सहजता हुने भएको हो । प्रतिष्ठानले पत्रकार सम्मेलन गरी कलेजो रोगको उपचारबारे बुधबार जानकारी गराएको थियो । यो उपकरणको सहयोगले वायोप्सी नगरी नै सबै प्रकारका हेपाटाइटिस र अल्कोहोलिक विरामीहरुको कलेजोमा भएको संक्रमणबारे सहजै परीक्षण हुने भएको छ । पहिले अल्ट्रासाउण्ड गरेर वायोप्सी गरेपछि मात्र कलेजोको अनुमानित अवस्थाका आधारमा उपचार हुने गर्दथ्यो । तर अब कलेजो
१,७६२ पटक पढिएको